विदेशिएका नेपालीलाई दोहोरो नागरिकता किन ? | Sima Pari
Home / Article / विदेशिएका नेपालीलाई दोहोरो नागरिकता किन ?
Posted by: Rishi Acharya in Article, Blog Leaveacomment
आज संसार प्रविधिको विकासले गर्दा साँगुरिदै गएको छ । तसर्थ एक देशबाट अर्को देशमा बसाइँ सर्नेहरुको लहर बढ्दो छ, अवसरहरुको खोजीमा। यो यथार्थता हो । जो कोही पनि विवेकशील प्राणी सधैं उज्ज्वल भविष्यको खोजीमा जन्मपश्चात मृत्युसम्म अनवरत लागिरन्छ । सुन्दर शान्त भोलिको प्रतिक्षामा। यसरी नै मान्छेहरुको एउटा आशा र अभिलाषा अनि कडा मेहनतले गर्दा एकै ठाउँमा बसिरहन नसक्ने बानीले गर्दा संसार हिजोको ढुङ्गे युगबाट आजको यो प्रविधिमूलक युगमा आइपुग्न सफल भएको हो। हैन भने एक ठाउँमै सधैं बसिरहने हो अनि घरबाट निस्केर गएको मान्छेलाई घरभित्र र्फकन नदिइन्थ्यो भने त आज पनि हामी ढुङ्गेयुगमै भइरहन्थ्यौँ। तसर्थ संसारलाई अघिल्तिर बढाउनका लागि बसाइसराई पनि एक महत्वपूर्ण पाटो हो। जब मान्छेहरु एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा जान्छन्, अवश्य पनि उनीहरुले नयाँनौला कुरा सिक्ने अनि सिकाउने गर्दछन्। जसले एउटा यस्तो माहोलको सिर्जना गरिदिन्छ समाजमा, जसले गर्दा सबै मान्छेहरु सबैलाई सम्मानपूर्वक व्यवहार गर्न पुग्दछन्। कुरो यो कि, कोही मान्छे आˆनो घर छोडेर टाढा गएर बस्यो भन्दैमा उसले त्यो घरलाई भुलेको हुँदैन। उसले त्यो घरसँगको आˆनो अतितलाई मेटेको हुँदैन, झनै ताजा बनेर उसको अतित उसको मानसपटलमा घुमिरहेको हुन्छ । तसर्थ उसलाई त्यो घरमा आउन जानमा रोक लगाउनु भनेको उसको भावनामा आघात पुर्‍याउनु हो । जुन एक किसिमको मानवीय अपराध पनि हो मेरो बुझाइमा। कतिसम्म न्यायसङ्गत होला त अर्काको घरमा गएर कोठा लिएर बसेको मान्छेलाई आˆनो घरमा आउन बस्नलाई रोक लगाइनु। चुरो कुरो हो, नेपाल सरकारले नेपालबाहिर स्थायी रुपले बसोबास गर्ने नेपालीहरुलाई दोहोरो नागरिकता दिन आनाकानी गरिनु।
संसारका अधिकांश मुलुकले दोहोरो नागरिकता दिइरहँदा नेपाल सरकारले दोहोरो नागरिकतालाई मान्यता नदिनुको अर्थ के ? आज नेपालबाहिर बसोबास गर्ने नेपालीहरुको संख्या बढ्दो छ । यही रˆतारमा बढ्ने हो भने ५० वर्षपछि नेपालमा भन्दा नेपालबाहिर बस्ने नेपालीहरुको संख्या बढी हुनेछ। अहिले तीन करोड नेपालीमध्ये लगभग ४० लाख नेपाली विदेशमा कार्यरत छन् । जसमध्ये करिब २५ लाख नेपाली स्थायी रुपमै विदेशमा बस्दछन् । उनीहरुलाई सधैं गाँजिरहन्छ अब साँच्चिकै हाम्रा छोराछोरीहरु अब नेपाली हुनबाट बञ्चित हुने हुन त ? के उनीहरुका छोराछोरी नेपाली भएर पनि नेपाली नागरिकता नदिनु न्यायसङ्गत होला त ? यसलाई नेपाल सरकारले चिन्तन मनन् गहिरो रुपमा गर्नु जरुरी छ। अब दोहोरो नागरिकता दिँदा र नदिँदा नेपाल सरकारलाई हुने फाइदा-बेफाइदाको बारेमा चर्चा गरौँ
१. २५ लाख नेपालीहरुमध्ये धेरैका घरजग्गाहरु छन् नेपालमा । जसलाई रेखदेख गर्न भए पनि उनीहरुमध्ये १२ लाख नेपाली लगभग बर्सेनी नेपाल जान्छन् । नेपाल गएका बेला उनीहरुले करिब प्रतिव्यक्ति २००० डलर खर्च गर्छन् । लगभग उनीहरुले गर्ने खर्च नेपालमा २५० मिलियन डलर हुन्छ। यो पैसाले नेपालको अर्थतन्त्रमा थोरै भए पनि सहयोग गर्नेछ।
२. आजका पच्चिस लाख नेपाली अबको १०० वर्षपछि करिब २ करोड हुन सक्छ । ती २ करोड नेपालीमध्ये १ करोड नेपाली बर्सेनी नेपाल घुम्न मात्र गैदिए पनि नेपालमा पर्यटनको स्वरुप नै बदलिने छ। ती एक करोड नेपाली नेपाल घुम्न जाँदा उनका विदेशी साथीभाइहरुलाई पनि नेपालप्रति कौतुहलता जाग्न सक्नेछ र उनीहरु पनि नेपाल भ्रमणमा जानेछन्।
३. विदेशमा बस्ने नेपालीहरुमध्ये कतिपय नेपालीहरु धनाढ्य वर्गमा पर्दछन् । उनीहरुले नेपालमा लगानी गर्नेछन् । जसले नेपालमा रोजगारीको सिर्जना गर्नुको साथै सरकारलाई राजश्वको स्रोत बढ्नेछ।
४. नेपाललाई नेपाली नागरिक भएका देशहरुसँग दौत्य सम्बन्ध कायम राख्न पनि सजिलो हुनेछ। किनकि उनीहरु दुई देशकै नागरिक हुनेछन्।
१. सरकारले जब दोहोरो नागरिकतालाई मान्यता दिँदैन जस-जसको घर जग्गा सम्पत्ति छ, नेपालमा उनीहरुले सबै बेचबिखन गरी विदेश लानेछन् । यदि पच्चिस लाख नेपालीले यसो गरे भने नेपालको अर्थतन्त्र धराशायी हुनेछ।
२. जब नेपालीहरुले आˆनै देश जान विदेशीजत्तिकै भिषा लगाउनु पर्ने हुन्छ, उनीहरु नेपाल तुलनात्मक रुपमा थोरै जानेछन् । जसले गर्दा पनि नेपालको आयस्रोतमा कमि आउनेछ।
३. जब विदेशमा बस्ने नेपालीले नेपालमा केही लगानी गर्दैन, नेपालमा निकै सङ्कट आइपर्नेछ किनकि भनिन्छ, नेपाल रेमिटयान्सबाट चलेको देश हो।
यस्तै थुप्रै घाटाहरु हुनेछन्, नेपाल सरकारलाई दोहोरो नागरिकता नदिँदाका अनि कैयौँ फाइदा छन दिँदाका। विदेशमा बस्ने नेपालीहरुलाई पनि दोहोरो नागरिकता पाए, नेपालमा लगानी गर्ने दरिलो फलामको ढोका खोलिनेछ। अनि आˆनो देशप्रतिको माया अझ दरिलो हुँदै जानेछ। हैन भने विदेशमा बस्ने नेपालीहरुको नेपाल प्रतिको श्रद्धा पातलिँदै जाने अनि कालान्तरमा नेपाली हुँ भन्ने नै दिन नरहन सक्छ। तसर्थ संसारभर नेपालको नाम राख्न चिनाउन पनि दोहोरो नागरिकता दिनु नै नेपाल सरकारलाई अत्युत्तम विकल्प हुनेछ।
– See more at: http://nepalipatra.com/news/detail/3624/5//.meroml#sthash.uRjgm45Q.dpuf
Previous: अस्ट्रेलियाको जातीय भेदभाव ऐन र बहुसांस्कृतिकवादको विकास
Next: स्व. मदन भण्डारीको नीति र नवौँ महाधिवेशन